Momba anay - Shandong Nisen Trade Co., Ltd.
Shandong Nisen Trade Co., Ltd. dia miorina amin'ny tanàna lohataona mahafinaritra ---- Jinan.
Nisen dia orinasa mirotsaka amin'ny R&D, orinasa mpamokatra entana, varotra upvc & alimina fanamboarana varavarankely, insulate fitaratra andalana famokarana sy varavarankely varavarana hardware sns.
"To omeo ny kalitao ny mpanjifa, handroso miaraka amin'ny fiaraha-monina, hitombo miaraka amin'ny mpanjifa, hanatsara ny ekipa "No fototra izay mampihatra ny fitantanana ny Shandong Nisen Trade Co., Ltd. amin'ny lafiny rehetra.
iSIKAmanome vokatra sy serivisy avo lenta miaraka amin'ny sandan'ny vola, manana traikefa lehibe momba ireo voakasik'izany. Fantatra amin'ny rafitra rafitra fitaratra am-baravarankely sy varavarankely izahay.
Fahatanterahana ny "hatsarana amin'ny alàlan'ny kalitao amin'ny alàlan'ny fanatsarana hatrany ny sandan'ny vokatra sy serivisy omenay ny mpanjifantsika & mba hisolo tena ny orinasanay matanjaka kokoa amin'ny maha-orinasa lehibe sy fikambanana eo amin'ny sehatry ny sehatr'asa vaovao izay hahatsapa ho lalina kokoa amin'ny taona ho avy. "
Mpiasa na ekipa mahay sy matanjaka ary mendri-pitokisana tanteraka, miasa milamina miaraka amin'ny foto-kevitra indostrialy 5S, KAIZEN, TPM (fikojakojana vokatra tanteraka), TQM (fitantanana kalitao tanteraka) hanome tanjaka tsara ho an'ny orinasanay.
Manana ny fanjakan'ny zavakanto izay miparitaka manerana an'izao tontolo izao isika.
Manampy anay amin'ny fanomezana ny mpanjifantsika isan-karazany ny milina Doors & Windows, tohanan'ny sehatr'asa mandroso.
Ny milina upvc & aluminium dia voamarina tsara ary voatazona amin'ny fomba tsy miova mba hiantohana ny fizotry ny famokarana, ary koa eo amin'ny fikambananay, ny fizotry ny famokarana dia mifototra amin'ny haitao mandroso ankehitriny, izay manampy antsika hahazo vokatra marobe tsy misy kilema.
Ny masinina tsirairay alefanay amin'ny mpanjifantsika dia voamarina tsara, feno fonosana ary tsara tantana mba hanomezana fandefasana tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Fahatsiarovana ny taranaka ho avy, manantena ny hiara-miasa aminao izahay.
Mampiasa ny fanahin'ny mpanao asa tanana izahay hanao asa tsara amin'ny vokatra, ary manolo-tena hanome anao ny vokatra sy serivisy kalitao tsara indrindra.
Ankoatry ny firotsahana amin'ny fanomezana milina & fitaovana ary rindrambaiko varavarankely, Ny orinasanay koa dia mandroritra ny fanomezana ny mpanjifanay amin'ny vahaolana mahomby sy mahomby, izay manampy amin'ny fitakiana indostrialy maoderina ataon'ireo mpanjifanay sarobidy.
Manana ekipa teknika sy fahaizana mandroso tsara izahay izay manampy anay hanome valiny mahafa-po ho an'ny mpanjifantsika.
Izahay dia mitazona foana ny masonay momba ny filàna sy ny takian'ny mpanjifanay, ny fironan'ny mpanjifa ary ny hevitry ny tsena.
FAMPANDROSOANA NY ORINASA & CUSTOMER
Santionany amin'ny varavarankely